DHAGEYSO:Puntland digniin u dirtay dadka ajaanibta ee deegaanada maamulkaas ku sugan | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Puntland digniin u dirtay dadka ajaanibta ee deegaanada maamulkaas ku sugan
DHAGEYSO:Puntland digniin u dirtay dadka ajaanibta ee deegaanada maamulkaas ku sugan
Wasiirka Maaliyadda Maamul Goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Xasan Shire Abgaalow ayaa sheegay in sharciga ay horgeyn doonaan dadka Ajaanibta ah ee diidan bixinta Canshuuraha ku waajiba mushaaraadkooda .
Waxa uu Xusay inuu jiro nidaam Canshuur qaadis oo ay sameyeen balse ay jiraan shaqsiyaad si ula kac ah u diidan bixinta Canshuurta lagu leeyahay ganacsiyadooda iyo mushaaraadka ay qaataan kuwa ajaanibta ah balse hadda ay hirgashay qaadista Canshuurta qofka diidana uu yahay dambiile .
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Canshuuraadka ay ka qaadan goobaha ganacsiga ,guryaha , gaadiidka iyo shaqaalaha ajaaniibta ah taasna ay doonayaan inay ka hirgaliyaan dhamaan deegaanada Maamulka Puntland .
Marar badan ayuu Maamulka Puntaland uu digniino kala duwan u diray shaqaalaha ajaaniibta ah ee ku sugan deegannada Maamulkaasi ee diidan bixinta Canshuuraha kuwaajibay mushaaraadkooda.
Previous articleNin sawir gacmeed ka sameeyay Nebi Maxamad oo geeriyooday
Next article2 qof oo lagu dilay Kerio Valley